अस्थिर आर्थिक र राजनीतिक अवस्था सबै भन्दा राम्रो तरिका फरक कम्पनीहरु र संगठन को कर्मचारीहरु असर छैन। ठूलो निगमों खर्च विशाल कमी। व्यवसाय खोल्न - यो अवस्था एक तरिका, तिनीहरूलाई को एक लागि खोज बढावा। साना व्यापार ठूलो आर्थिक संभावनाहरु छ, यो मोबाइल छ र श्रम बजार मा एक कठिन अवस्था को प्रारम्भिक निस्कनुहोस् योगदान पुग्छ।
कसरी स्क्राच देखि एक व्यापार खोल्न: पहिलो कदम
बजार मा एक स्वतन्त्र गतिविधि embarking अघि, एक प्रारम्भिक प्रिपेरेटरी काम हुनुपर्छ। व्यवसाय खोल्न गाह्रो छैन, मुख्य समस्या - तिनीहरूलाई संलग्न र लाभ गर्न जारी छ।
सबै को पहिले निम्न कदम लिन आवश्यक छ:
उपभोक्ताहरु र कसरी तिनीहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ को आवश्यकता पहिचान गर्न बजार अनुसन्धान सञ्चालन;
आफ्नो ठाँउ पहिचान, के व्यापार खोल्न सकिन्छ निर्णय;
प्रतियोगिहरु पहिचान, तिनीहरूको बलियो पक्ष र कमजोरी निर्धारण;
भौतिक समर्थन को मुद्दाहरू समाधान - बीउ राजधानी परिसर, कर्मचारीहरु;
आफ्नो गतिविधिहरु कानूनी रूप;
तपाईंको व्यापार विचार को तागत र कमजोरी पहिचान।
यसलाई बजार अनुसन्धान सञ्चालन गर्न मात्र होइन, तर पनि खुला मामला सुनिश्चित र भौतिक लाभ हुनेछ, र नैतिक सन्तुष्टि आवश्यक छ। आखिर, मात्र साँच्चै भावुक मान्छे पाठका के को हाइट्स पुग्न सक्दैन।
साना व्यवसायहरू को खोज र विकास गर्न आवश्यक रकम कसरी प्राप्त गर्न
खुला भएको कुरा हो, समाधान गरिएको छ के आग्रह गर्दा, यो सामाग्री पक्ष को निर्णय विचार गर्न आवश्यक छ। यो एक व्यापार सुरु गर्न आवश्यक रकम गणना गर्न आवश्यक छ। सबै लागत गणना, यो हुन सक्छ:
सामाग्री र उपकरण को प्रारम्भिक खरिद;
चालु खर्च - बिजुली, पानी, ग्यास, कक्ष सेवा, पेट्रोल, कार्यालय आपूर्ति;
सुरु-अप राजधानी कर्मचारीहरु गर्न ज्याला लागि;
विज्ञापन र यति मा। डी।
कि व्यापार खुला सुनिश्चित गर्न आवश्यक रकम, अपेक्षाकृत सानो छ भने, त्यसपछि यसलाई पाउन गाह्रो छैन। निम्न छन् सुरु-अप राजधानी रही लागि सबै विकल्प बीच:
बैंक ऋण जाँच गर्नुहोस्। साना व्यवसायहरू लागि, त्यहाँ व्यापार विकासका लागि विशेष नरम ऋण हो। सामान्यतया तिनीहरूले ग्यारेन्टी समर्थन अन्तर्गत छन्, तर त्यहाँ विकल्प र सजिलो ऋण हो।
नातेदार वा साथीहरूको उधारो। यो विकल्प खिचलो संग fraught छ। दुर्भाग्यवश, मित्र अक्सर neotdannymi ऋण भताभुंग पार्छ। तथापि, तपाईं प्राप्त चासो मुक्त ऋण फिर्ती को सख्त सर्तहरू बिना। एक रसिद लागि आवेदन र नोटरी को उनको आश्वासन निश्चित हुनुहोस्।
आफैलाई कमाउन, व्यक्तिगत बचत लगानी वा बेच्न सम्पत्ति एक टुक्रा। यो विकल्प बैंक वा साथीहरूको एक ऋण भन्दा बढी स्वीकार्य छ। तपाईं मात्र आफूलाई गर्न जवाफ।
तपाईंको व्यापार को लागि लगानीकर्ताले पाउन। यसलाई निजी व्यक्तिविशेष र संगठन दुवै हुन सक्छ। यस मामला मा तपाईं लाभ को भाग साझेदारी गर्न हुनेछ, तर तपाईं कसरी स्क्राच देखि एक व्यापार खोल्न को समस्या निर्णय।
राज्य सब्सिडी र अनुदानको व्यवस्था। तपाईं सान्दर्भिक अधिकारीहरूले गर्न प्रदान गर्नुपर्छ लागि एक व्यापार योजना विकास र यसलाई रक्षा। राज्य जनसंख्याको रोजगार सुरक्षा रूपमा साना व्यवसायहरू को विकास मा रुचि छ।
यी आधारभूत, सबै भन्दा साधारण पैसा प्राप्त विकल्प हो।
कसरी स्क्राच देखि एक व्यापार खोल्न: विचार र विकास विकल्पहरू
सुरु-अप राजधानी प्राप्त समस्याहरू एकदम हल गर्दै छन्, र यसको अभाव - छैन सपना हरेस एउटा कारण। काम र संभावना प्रेम प्रेरित र बल दिन र कसरी स्क्राच देखि आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न को समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ क्षेत्रमा विकास।
विचार बढ्न तपाईंको व्यापार धेरै विविध हुन सक्छन्:
विभिन्न सामान को बिक्रि;
विनिर्माण र असामान्य कुरा बेच;
पढाउने र व्यापार परामर्श;
सेवाहरू, र यति मा को एक किसिम प्रदान। डी।
जो आफ्नो सानो व्यवसाय को निर्देशन तपाईँले चयन, तपाईं सधैं भविष्यमा हेर्न गर्नुपर्छ। तपाईं कसरी भविष्यमा यसलाई विकास गर्न सक्छौं, कसरी लाभ वृद्धि र आफ्नो बजार आला विस्तार गर्न? तपाईं गहिराई बढ्न सक्छ नियमित ग्राहकहरु पाउन र कामको गुणस्तर सुधार गर्न। एउटा राम्रो विकल्प - निरन्तर विस्तार, शाखा खोल्ने र आफ्नो कर्मचारीहरु राखने।
आफ्नै साना व्यापार खोल्ने अघि, तपाईं पैसा तर पनि समय बन्द मात्र होइन लगानी गर्न इच्छुक छन् कसरी गम्भीर निर्णय। पहिलो पटक, यो सबै शक्ति लगभग हुनेछ। तर परिणाम - काम व्यापार, मात्र होइन आय, तर पनि ल्याउन मजा - एक सभ्य परिणाम।
एउटा विकल्प लघु व्यवसाय रूपमा घर काम
सबैभन्दा घर आधारित व्यापार विकल्प ठूलो लगानी आवश्यक छैन। यो सेवानिवृत्त लागि आकर्षक छ, प्रसूति मा आमा छोड्न, विकलांग व्यक्ति। घर-आधारित रोजगार विकल्पहरू धेरै छन्।
घर को क्षेत्र मा, के तपाईं व्यापार खोल्न सक्नुहुन्छ। के कुरा - यसलाई तपाईं हो। तपाईं सबै भन्दा राम्रो गर्न र क्षमता के छ, यो विशेष ज्ञान वा डिप्लोमा गर्न आवश्यक छैन छ के गर्न सक्छ।
घर-आधारित व्यापार को लागि विकल्प:
आदेश व्यक्तिगत सिलाई वा बुनाई कुराहरू;
यस्तो केक लोकप्रिय मास्टिक रूपमा मिठाई उत्पादन को निर्माण;
को निर्माण कुनै पनि हात-गरे;
घर भोजन को संगठन;
संयुक्त खरीद को संगठन;
फोनमा काम परामर्श र "स्काइप" र यति मा। डी।
व्यवसाय कसरी सुरु गर्न को प्रश्नको समाधान को सबै भन्दा आधुनिक संस्करण - इन्टरनेटमा कमाउन सिक्न। यो व्यवसाय हालै देखा, तर पहिले नै एकदम लोकप्रिय छ। यस्तो काम केही embodiments विशेष शिक्षा आवश्यक, तर ती सबै भन्दा लागि - पर्याप्त कम्प्युटर साक्षरता को मूल कुराहरू जान्न। अन्य कौशल समय संग आउनुहोस्।
कसरी इन्टरनेट पैसा बनाउने? निम्न विकल्पहरू सम्भव छ:
साइट विकास र पदोन्नति;
प्रशासन र अनलाइन समुदाय को संयमता;
मध्यस्थता सेवा, र यति मा को प्रावधान। डी।
Whichever विकल्प आय तपाईँले चयन वर्ल्ड वाइड वेब मार्फत आफ्नो गतिविधिहरु formalize सम्झना।
बगैंचामा आफ्नो काम - बढ्दो साग र तरकारी
तपाईं एक पिछवाडे संग एक निजी घरमा बस्नुहुन्छ भने, वा तपाईंको सम्पत्तिको मा भूमि को एक टुक्रा छ, हामी खाना बिक्री मा बढ्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। साधारण र सबैभन्दा प्रभावकारी विकल्प बिक्री को लागि हरियो को उत्पादन हुन्छ। त्यो माग मा सधैं छ, र खुला क्षेत्र र Greenhouses राम्रो तरिकाले बढ्छ।
यो उत्पादन समाप्त लागि बजार पाउन सजिलो छ। यो लगभग कुनै पनि संस्थाले खानपान। एकरूप को प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न हेरविचार र निडर भई क्याफे र रेस्टुरेन्ट लागि व्यापार प्रस्ताव बाहिर पठाउनुहोस्।
फूल व्यापार - bouquets र छुट्टी सजावट
तपाईं आफ्नो व्यवसाय कसरी सुरु गर्न तर के थाहा छैन सिक्न चाहनुहुन्छ भने, फूल व्यापार आफूलाई प्रयास गर्नुहोस्। Bouquets र छुट्टी सजावट ताजा फूल संग झन् लोकप्रिय र मागका व्यापार बन्दैछ।
किनमेल केन्द्र को भूमि तल मा अडान-एक्लै किओस्क वा बिक्री क्षेत्र - तपाईं एक कोठा आवश्यक हुनेछ, यो मनमोहक छ। पहिलो पटक, तपाईं स्वतन्त्र काम गर्न सक्छन्, तर विस्तार सहायक लेना मनमोहक छ।
व्यापार को एक भेद रूपमा purebred जनावर प्रजनन
एक ब्रीडर बन्न र प्रजनन र जनावर बिक्री को व्यवसाय खोल्न गर्न, आवश्यक एक पेशेवर डिग्री छैन। एक निश्चित वर्ण गोदाम छ, शरीर विज्ञान र शारीरिक रचना आधारभूत ज्ञान छ साथै पर्याप्त। हाम्रो कान्छो भाइ मनपर्छ र कोठा मा एक ठूलो क्षेत्र छ यकीन हुनुहोस्।
तपाईं केवल एक purebred पशु किन्न, तर पनि एक विशेष समुदाय सिर्जना गर्न आवश्यक हुनेछ। पनि निरन्तर प्रदर्शनियों भाग र नियमित निवारक चेक-अप पाल्तु जनावर सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। यो सुरक्षित प्रजनन लागि सबै भन्दा राम्रो नमूनों पत्ता लगाएर आवश्यक छ।
खेती र पर्यावरण-पर्यटन
को शहरी जनसंख्या बीच अधिक लोकप्रिय पर्यावरण-पर्यटन बन्दैछ। फारमहरु मा आवास यो यात्रा। तपाईं एक ठूलो पर्याप्त साइट र घटनाहरू संगठित गर्न इच्छा छ भने, यो राम्रो पैसा बनाउन सक्छ। सुरु पर्याप्त हुनेछ लागि, छ।
को गर्मी समयमा, अतिथि पाल वा पालमा बसोबास गर्न सक्नुहुन्छ। हिउँदमा, पाठ्यक्रम, न्यानो कोठा व्यवस्थित गर्नुपर्छ। लाभ मनोरञ्जन, ओवन र काठ-जल सना देखि प्रामाणिक व्यवहार हुनेछ।
एक मनोरञ्जन पर्यटकहरु प्रस्ताव गर्न सकिन्छ रूपमा:
पडोस वरिपरि चढेर घोडा, तर घोडा, सवारी चाहनुहुन्छ नगर्ने ती लागि दोहन घोडा एक गाडी मा;
ट्रयाक्टर बाइक मा चढेर;
यस्तो धेरै शहरी dwellers आफैलाई जाम खाना पकाउनु त्यसपछि एक गाई वा भेला जामुन दूध गर्न चाहनुहुन्छ रूपमा खेत गतिविधिहरु, मा सहभागिता;
को मह नै सङ्कलन गर्ने क्षमता संग apiary ekskursiyai;
एक वास्तविक रूसी ओवन मा खाना पकाउने;
को स्लेज मा sleigh सवारी, हिउँ झगडे, पुरातन enchantments, बरफ पौडी - हिउँदमा।
तपाईं एक अद्वितीय शिक्षा या विशेष सीप दुर्लभ हो भने, तपाईंले तिनीहरूलाई वस्तु रूपमा प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक स्वतन्त्र विशेषज्ञ सलाहकार रूपमा मास्टर कक्षाहरू, वा कार्य सञ्चालन गर्न तयार बनाएको पाठ बेच्न सम्भव छ।
कानुनी सल्लाह र नोटरी कार्यालय;
विशेष प्रशिक्षण सहित मनोवैज्ञानिक सेवाहरु,;
पाठ र विभिन्न निर्देशनहरू को मास्टर कक्षाहरू;
outsourced लेखा र कर्मियों सेवाहरू, र यति मा। डी।
Consultations ग्राहकको परिसर मा सञ्चालन गर्न सकिन्छ, र आफ्नो कार्यालय खुलेको छ। यसलाई आसन्न निर्देशनहरू संग सहकर्मीसँग एकताबद्ध गर्न लाभप्रद छ। यो सेवाहरूको दायरा विस्तार गर्न मद्दत र थप इच्छुक मानिसहरूलाई आकर्षित हुनेछ।
व्यक्तिगत उद्यमशीलता को एक भेद रूपमा पढाउने
विद्यालय शिक्षक र विश्वविद्यालय प्राध्यापकहरू गलत समझ बैठी सामाग्री व्याख्या गर्न एक अद्वितीय क्षमता छ। र, तदनुसार, आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
व्यापार विचार को लागि पढाउने व्यक्ति विद्यार्थी सिक्ने भन्दा धेरै फराकिलो छ। तपाईं रिमोट पाठ संगठित गर्न स्काइप मार्फत कक्षाहरू पकड। एउटा राम्रो विकल्प - वयस्क शिक्षार्थियों को एक समूह सङ्कलन र कार्यस्थल मा सीधा शैक्षिक प्रक्रिया नेतृत्व गर्न।
सबै भन्दा लोकप्रिय विदेशी भाषा र विज्ञान मा पढाउने सेवाहरू छन्। साथै, उच्च विद्यालय स्नातक लागि एकीकृत राज्य परीक्षा गर्न सेवाको तयारी लागि सान्दर्भिक हुनेछ। सहकर्मीहरुका साथ टोली र पढाउने केन्द्र पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।
यस वर्गमा स्कूल छोराछोरीलाई तयार शैक्षिक सेवा समावेश हुन सक्छ। यो प्रतिष्ठित माध्यमिक विद्यालय भविष्य प्रथम ग्रेडर गर्न भर्ना लागि ज्ञान को एक निश्चित सेट हुनुपर्छ भन्ने कुनै गोप्य छ। प्राथमिक विद्यालय शिक्षकहरूको स्कूल मात्र मदत छन् सामाग्री परिचित, तर पनि मनोवैज्ञानिक बच्चाहरु तयार।
उत्पादन र हात-मैदा को बिक्री
कुनै पनि सानो कुरा, आफ्नै हात, अद्वितीय र inimitable संग गरे। यो लागत बढ्छ र यो धेरै आकर्षक बनाउँछ। तपाईं बुनाइ को कुनै पनि प्रकार बारे भावुक हुनुहुन्छ भने, तपाईंले यो बेच्छ गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
हात-बनाएको यो विशेष स्रोतहरू र पसलहरुमा मद्दत गर्नुहोस्। अर्को ठूलो विचार - पसलमा खोल्ने "आफ्नै रेजिमेन्ट।" तल लाइन छ कि छैन अक्सर एउटा सानो शुल्क समतल को एक लागि मल किराए मा बिक्री को बिन्दु को मालिक,। त्यो हस्तनिर्मित वस्तुहरूको बिक्री को लागि माथि राखे। विजार्डहरू पनि विक्रेता को काम को भाग भुक्तानी गर्नेछ।
हात-गरे काम मा सबै भन्दा राम्रो व्यापार विकल्प आरक्षण हो। मालिकको सहकारी एकताबद्ध र एक उत्पादन को निर्माण को लागि एक कोठा भाडामा साझेदारी गर्न सुविधाजनक हुनेछ।
मा व्यापार विकल्प हात-गर्नुभयो:
अर्डर गर्न सिलाई र बुनाई;
गुडिया को निर्माण;
आदेश नरम अक्षरहरू सिलाई;
गलैँचाहरु र नरम पुस्तकहरु निर्माण विकास;
विकास उत्पादन खडा;
विभिन्न सजावटी तत्व र जस्तै। घ को मार्गदर्शन उत्पादन।
दृष्टिकोण र विकल्प: मध्यम कारोबार गर्न साना विकास
व्यवसाय सुरु गर्ने जो कोहीले, सफल गर्न चाहन्छ। यो हामी कडा परिश्रम र बजार को व्यवस्था बुझ्न आवश्यक छ। माग सिर्जना आपूर्ति, मात्र छैन, तर पनि अन्य गतिविधिहरूको लागि फैशन रुझान हुक्म। तपाईं एउटा प्रयास बनाउन र उपभोक्ता को इच्छा पालन भने, त्यसपछि समय तपाईं व्यापार विस्तार विचार गर्न सक्नुहुन्छ।
चयन गरिएको व्यापार प्रसन्न र लाभ, थप विकासका लागि पर्याप्त बनाउँछ भने - अगाडि जान स्वतन्त्र महसुस। सबै प्रतिबन्ध - मात्र तपाईंको टाउको, वास्तवमा, सम्भावनाहरू अनन्त छन्। तपाईंको व्यापार सुरु र मुक्त बन्न!
त्यहाँ एउटा प्रश्न थियो: "कसरी उर्दी पैसा बनाउने?" त्यसपछि तपाईं यहाँ ...
बजार तंत्र र यसको तत्व
मनोरंजन सुविधाहरु रूस
जिन्स LTB - विश्व-प्रसिद्ध ब्रान्ड
मौसममा के छ? मौसमको प्रकार
"Polioksidoniy": मूल्य, instrutsiya, विकल्प दबाइ। "Polioksidoniy": समकक्षों
को देवताहरूको पिउन - एक स्वादिष्ट र स्वस्थ तातो चकलेट
Superfoods बोट, के तपाईंलाई थाहा छ जो